केन्याविरूद्ध डेब्यू गरेका सुनिल र दिपेन्द्रको कस्तो रह्यो प्रदर्शन? | Hamro Khelkud
केन्याविरूद्ध डेब्यू गरेका सुनिल र दिपेन्द्रको कस्तो रह्यो प्रदर्शन?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत शनिबार टि.यु. मैदानमा भएको खेलमा नेपालको लागि दुइ युवा खेलाडीले डेब्यु गरे। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सुनिल धमलाले केन्या विरुद्धको खेल अगाडी राष्ट्रिय टोलीको क्याप पहिरिएर राष्ट्रिय टोलीका लागि आफ्नो पहिलो खेल खेलेका थिए। दुवै खेलाडीले यु-१९ राष्ट्रिय टोलीबाट यसअघी खेलिसकेका छन्।
घरेलु क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका दुवै खेलाडीले आफ्नो पहिलो खेलमा भने उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेनन्। कार्यवाहक कप्तानसंग ओपनिङ गर्न आएका २१ वर्षीय सुनिल धमला ११ बलमा जम्मा ३ रन बनाएर आउट भए। उनि ओटीएनोको बलमा राकेप पटेलबाट क्याच आउट भएका थिए। एक तिरबाट ज्ञानेन्द्रले राम्रो खेलिरहँदा धमलाले आफ्नो विकेट गुमाएका थिए।
दोश्रो विकेटका रुपमा ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएपछि चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका १८ वर्षीय दिपेन्द्र सिंह ऐरीले धैर्यतापुर्वक ब्याटिङ गरे। ५६ बल खेलेका ऐरीले बिना कुनै बाउन्ड्री १९ रन बनाएका थिए। उनले सागर पुनसंग तेश्रो विकेटको लागि ८ रन र शरद भेषवाकरसंग चौथो विकेटका लागि १० रनको साझेदारी गरेका थिए। बिनोद भण्डारी संग पाँचौ विकेटका लागि ११ रन जोड्दा महबुब आलम र ऐरीले छैठौं विकेटका लागि ५ रनमात्र जोड्न सके।
एकतिर बाट लगातार विकेट गएपछि रन जोड्नपर्ने दवाव उनीमाथि आइपुगेको थियो। सातौं विकेटका रुपमा स्पिनर एन’गोचेको बलिङमा क्याच आउट भएका ऐरीले सन्तोषजनक ब्याटिङ गरेका थिए।
पहिलो खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेपनि सोमबार हुने केन्यविरुद्धको दोश्रो खेलमा उनीहरुको सम्भावना कायम छ। घरेलु क्रिकेटमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका दुइ युवा खेलाडी आउने पुस्ताका लागि आशालाग्दा प्रतिभा हुन्।